Fantaro ireo orinasa mitsidika ny tranokalanao | Martech Zone
Fantaro ireo orinasa mitsidika ny tranokalanao
Sabotsy, Desambra 13, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia nanatrika fampisehoana mahafinaritra be aho Rano fitakiana fangatahana?. Demandbase Stream dia Adobe AIR fampiharana izay ahafahanao manara-maso ny fivezivezena amin'ny Internet amin'ny fotoana tena izy.
David Lieberman, filoha lefitry ny fampandrosoana ny orinasa dia namaritra ny Demandbase Stream:
Demandbase Stream no rindrambaiko voalohany tsy misy mpitety tranonkala ahafahan'ny olona mivarotra sy mivarotra hahalala hoe iza ny orinasa mitsidika ny tranonkalany, inona ny zavatra mahaliana azy ireo ary iza no hifandray. Amin'ny alàlan'ny fampidinana ny maimaim-poana Rano fitakiana fangatahana? fitaovana ary mampifandray izany amin'ny tranokala ary mankany amin'ny Demandbase Direct?, na iza na iza dia afaka mamadika ny fitsidihana an-dàlana ho fitarihana varotra azo atao.
Avy amin'ny ticker iray izay mihazakazaka manerana ireo mpampiasa birao dia afaka mijery ny mombamomba ny fifamoivoizana amin'ny orinasa, ny antsipirian'ny orinasa ary ny fifandraisana atoro azy ao anatin'ny minitra vitsy. Azon'ny mpampiasa atao koa ny mametraka ny safidiny mba hanivana ny fivezivezena avy any ivelan'ny faritra fivarotana na avy amin'ny Internet Service Providers (ISP's).
Tena manova ny indostria izany! Raha mpivarotra miasa B2B ianao dia tsy ho fantatrao ihany ireo orinasa nisoratra anarana tamin'ny tranokalanao tamin'ny alàlan'ny Call to Action (whitepaper download, webinar, sns.) Ary ireo mpitsidika hafa dia tsy fantatra anarana. Amin'ity haitao ity dia azonao atao ny mahita hoe iza no ao amin'ny tranokalanao amin'ny fotoana tena izy!
Ny kinova Pro aza dia mahaliana kokoa, manara-maso ary ahafahanao misintona angon-drakitra firmagraphic! Miresaka momba ny mpamokatra firaka. Na dia tsy nanome anao ny mombamomba anao aza izy ireo, ity dia hahafahanao mifanerasera am-pahavitrihana ny orinasa hahitana raha mila fanampiana fanampiny izy ireo. Izany dia hitarika amin'ny fitomboan'ny varotra!
Tags: marketing amin'ny Bluetoothdigbydigby localpointfitsapana beta betafinday eo an-toeranatoerana mahalalaMari Smithtsoratadidy sosialytag cloud
HD Video dia mety ho tafiditra ao amin'ny tetikadin'ny varotrao
Fitaovana vaovao mahafinaritra. Ny votoatin'ny orinasanay dia nitodika tany amin'ny orinasa hafa, ka mety tena hanampy izany. Toa tsara ho an'ny mitondra mangatsiaka "manafana" izany.